एकै दिन चार हजारभन्दा बढी संक्रमित, तथ्याङ्कमा कोरोना भाइरस – MySansar
एकै दिन चार हजारभन्दा बढी संक्रमित, तथ्याङ्कमा कोरोना भाइरस
Posted on October 12, 2020 October 12, 2020 by Salokya
आज देशभर ४ हजार ४७ जना संक्रमित भेटिए। त्यसमध्ये ४६.६५ प्रतिशत काठमाडौँका छन्। अर्थात् अझै पनि काठमाडौँ जिल्ला सबैभन्दा धेरै जोखिम स्थलका रुपमा रहेको छ। आज कूल परीक्षण १४ हजार ५३० मात्रै थियो। अन्य कुन जिल्लामा कति संक्रमित भेटिए माथिको नक्सामा हेर्नुस्। ठूलो नक्सामा हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुस्।
कुन प्रदेशमा कति संक्रमित भेटिए त आज ? अक्टोबर १२ तारिखको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने कूल संक्रमितको ६४.२७ प्रतिशत वाग्मती प्रदेशमा भेटिए। दोस्रो स्थानमा रह्यो प्रदेश १। यहाँ १३.८६ संक्रमित भेटिए। सबैभन्दा कम संक्रमित प्रदेश २ मा भेटिएको छ।
ठूलो नक्सामा हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुस्।
महिला र पुरुषको हिसाबसहित आज कुन प्रदेशमा कति संक्रमित भेटिए? हेर्नुस् यो म्यापमा
काठमाडौँ उपत्यकामा उमेर समूह अनुसार संक्रमणको स्थिति हेर्ने हो भने २१ देखि ६० वर्षसम्मको उमेर समूहमा बढी संक्रमण देखिन्छ।
यो चार्ट ठूलो बनाएर हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुस्।
आज सयभन्दा बढी संक्रमित भेटिएका जिल्लाहरु